Norway inotevera kuva neApple Watch Series 4 inowanikwa | Ndinobva mac
Kuwedzera kwemaApple smart watches kunoenderera kutenderera pasirese uye panguva ino tine nhau dzeimwe kuvhurwa, mune ino nyaya kuNorway. Munyika ino vanga vasina mawachi eApple anowanikwa panguva ino uye izvozvi Ivo vatovepo kuti chengetedze nhasi uye muunganidzwa muna Zvita 7.
Iyo nyowani Apple Watch mamodheru ane LTE (nhare) yekubatanidza dzakapihwa Nyamavhuvhu wadarika kuburikidza nenyika zhinji asi nhasi vanoramba vachisvika kune vamwe. Parizvino, vashandisi vanoda kutenga idzi nyowani Seris 4 neLTE vane vaviri vemuno vashandisi vari kupa mukana wekubatana, Telia kana Telenor.
Iyo Apple Watch inoramba ichikunda uye hapana stock
Kuburitswa kwacho kunononoka zvakare nekuda kwekushomeka kwemaawa eApple akangwara, uye zvinoita sekunge izvo zviri kuitika zviri kuitika pane iyo itsva iPhone XR, kudiwa kukuru kweApple Watch kunoita kuti kuwedzera kwayo kunonoke kupfuura izvo Apple pachayo inoda. Munyika yedu isu tinopfuurira nezvishoma zvigadzirwa muzvitoro uye zvinotumirwa izvo zviripo izvozvi kune mamwe mamodheru ane LTE kutumirwa kubva muna Zvita 17 kusvika 27, saka zvinonetsa kuwana iyo modhi yatinoda.
Hongu ichokwadi kuti mune chairo Apple Store iwe unowana imwe yakatarwa modhi pane dzimwe nguva uye pamusoro pezvose yemamodeli asina LTE yekubatanidza, asi mumitsara yakawandisa kushomeka kwechigadzirwa ndicho chinyorwa chikuru. Kana iwe uri kufunga nezve kutenga imwe yeaya mawachi paApple pazororo iwe unofanirwa kuita zvishoma kutarisa nezvezvitoro uye kutora mukana wenguva dziri mudura. Asi zvirokwazvo, kana iwe usina chitoro chepamutemo padhuze nepamba, zvinhu zvinoshanduka zvakanyanya uye ndiko kuti kutumira kunoramba kuchiwedzera kunonoka.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Norway, nyika inotevera kuva neApple Watch Series 4 inowanikwa
Apple Music iri kuuya pakupedzisira kuAmazon's Echo speaker, ingori nguva yeKisimusi
Blackmagic eGPU Pro kumusika kunonoka